Ka hortag oo dib usoo cesho timahaaga adiga oon u baahanin beeridda tinta (Hair transplant) - Muraayad
Home Maskax-fur Ka hortag oo dib usoo cesho timahaaga adiga oon u baahanin beeridda...
Bidaarta ama tinta oo ragga ka dhamaata, bidda, ama joojisa inay ka soo baxdo qaybo ka mid ah madaxa ayaa rag badan ku dhalisa walwal iyo murugo tiro badan.
Haddii aad doonaysid in aad baratid sababta ay raggu bidaarta u gasho, sii akhri.
Maxaa sababa bidaarta ragga?
Sababta ugu wayn oo ay rag badani bidaarta u gasho ayaa ah xaalad dhaxaltooyo oo loo yaqaano androgenetic alopecia sida uu ururka American Association of Hair Loss sheegay.
Xaaladan dhaxaltooyo oo khafiifisa tinta qaybta hore ee ragga ayaa waxaa sababa hormoonka testosterone maado (byproduct) uu dhaliyo oo loo yaqaano dihydrotestosterone (DHT).
Waa maxay testosterone? Waxaa sharxaya Diktoor Caafi, wuxuuna yiri,
“Waa hormoon ka tirsan hormoonnada ragga ee loo yaqaano “Androgen” waxaana laga helaa dadka iyo xoolaha intaba, badanaa waxaa laga soo daayaa xiniinyaha. Haweenka laftirkooda way qabaan hormoonkaan laakiin aad ayuu ugu yaryahay. Waa hormoonka u qaabilsan korriinka xiniinyaha, qanjirka ragga, soo saarka tinta ragga lagu garto iyo qaab u samaynta murqaha iyo lafaha ragga.”
Sida uu ururka American Association of Hair Loss sheegay, Boqolkiiba 25 % ragga ayaa waxaa ku bilaawda bidaarta marka ay da’doodu 21 sano ka gudubto, marka ay 35 sano gaaraan boqolkiiba 66 % ragga ayaa dareema ugu yaraan nooc la xiriira bidaarta sida salxanyaha oo si fiican u muuqda ama bilaaba in ay tinta aad uga khafiifto. Marka ay da’da ragga gaarto 50 sano, boqolkiiba 85 % ayaa si cad u lumiya tintooda oo waxaa si toos usoo baxda bidaarta.
Waxaa aad u yar daawaynta bidaarta marka ay qofka si toos ah u gasho. Beerida tinta ayaa ah qaabka ugu caansan oo tinta ragga kusoo ceshadaan marka ay si toos ah uga dhamaato, waana qaliin aad kharashkiisu u badan yahay.
Balse waxaan halkan idinkugu haynaa qaab looga hortagi karo in ay tintaada wajiga hore kasii fogaato. Salxanyaha oo kugu fogaada ayaa ah bilaawga bidaarta, sidaas darteed waa muhiim in aad ka hortagtid.
Waxaan halkaan idiinkugu haynaa qaab aad tintaada dib ugu soo noolayn kartid, salxanyaha sii fogaanayana ay kuugu soo noqon karaan.
Waxaan kugu soo dhawaynayaa daawaynta Dermaroller.
Waa maxay Dermaroller?
Sida lagu sheegay warqad cilmi baaris oo kasoo baxday International Journal of Research in Dermatology bishii Saddexaad ee sanadkii hore 2020 ayaa waxaa lagu cadeeyay in Dermaroller ay tahay aalad casri ah oo loo isticmaalo in lagu daweeyo maqaarka jirka qaybahiisa kala duwan. Dermaroller waxaa loo isticmaalaa in dib loosoo nooleeyo dareemaha iyo unugyada maqaarka oo horay shaqada u joojiyaan sababo kala duwan darteed.
Dermaroller ayaa leh cirbado aad u yar yar, kuwaas oo dhaawac fudud ku sameeya meesha tinta ka baxday, taas ayaa ku khasabta in daafaca jirka uu shaqo meeshaas ka bilaabo dibna isu daweeyo, daafaca jirka ayaa dhiig iyo macdan (minerals) badan usoo dira boogta uu Dermarollerka sameeyay, Nafaqada iyo macdantaas ayaa wada daweeysa dibna usoo nooleysa unugyadii tinta korin jiray sidaasna waxaa dib usoo dhasha tintii meesha ka guurtay.
Sidee loo isticmaalaa Dermaroller?
Waa muhiim in aad iska ilaalisid Jeermiska nooc walba uu ahaado maadaama Dermaroller uu cirbado yar yar toos jirkaaga ugu mudi doono.
Biyo kulul ayaad kor uga shubaysaa, had dhex galinin biyaha kulul, kor uga soo shub.
Alcohol (Jeermis-dille) ayaad ku raacsiinaysaa inta aadan isticmaalin
Madaxa shaambo ku dhaq iyo meesha aad rabtid in aad u isticmaashid Dermaroller-ka
Tinta si fiican u shanleey
Muddo 10 daqiiqo ah, Dermaroller-ka ku shanleey ama dul mar mari, ogoow waa cirbado, waana ku xanuunjin karaan. Xoog ha u isticmaalin marka aad dul marinaysid. Dhaawac ha isu geysanin, dhiig badan ha iska keenin.
Boogta ayaa ku gaduudanaysa oo u muuqan karta in ay dhiig keentay, haka wel welin.
Markaad dhamaysid, waxaad boogta marisaa saliid olive ah ama macsaro yar.
Usbuuci 2 jeer ka badan ha samaynin daawayntan.
Xageed ka heli kartaa Dermaroller?
Dermaroller waxaad ka dalban kartaa suuqyada online-ka ah. Waxaan hoos idiin soo dhignay suuqyada ugu waawayn oo aad ka gadan kartaan Dermaroller.
Linkiyada aan hoos idinkugula wadaagnay waa kuwo sax ah oon idinka hubinay.
Reer kenya ayaa ka iibsan kara Jumia, Guji Linkiga hoose wuxuu toos kuu geynayaa meesha aad ka gadan kartid haddii aad kenya Joogtid. Soomaaliya qofkii joogo wuxuu u dirsan karaa qofk Kenya joogo si uu ugu soo dhiibo. Suuqyada Soomaaliyana waad ka raadsan kartaa haddii uu yaalo.
Dermaroller by Jumia Kenya
Haddii aad joogtid North America, waxaad ka iibsan kartaa Amazon, waxaan hoos kuugu diyaarinay linkiga aad toos uga iibsan kartid.
Dermaroller by Amazon
Dermaroller daawayntiisa waxay qaadanaysaa muddo 6 billood ilaa iyo hal sano. Maahan daawo deg deg kuugu soo bixin karta tinta, waa daawo dabiici ah oo u sahlaysa in jirkaaga isagu is daweeyo waxayna qaadanaysaa wakhti.
Aniga ma ahi Takhtar, waxa aan halkan kugula wadaagay waa fikir iyo baaritaan aan si madax baan usoo sameeyay. Fadlan, haddii aad xanuunada jirka qabtid, ama xanuuno kale oo uu dhibaato u keeni karo, la tasho takhtarkaaga inta aadan tijaabinin.
Previous article10-kii magaalo ee ugu horreeyay Afrika (mid waxaa leh Soomaali)
Next articleCOVID19 iyo awoodaha baasaboorada Geeska Africa. Yaa hadda ugu sarreeya?